Maminany izy ireo fa ny Macs dia hitondra ny takelaka amin'ny iPhone X amin'ny famoahana amin'ny ho avy | Avy amin'ny mac aho
Maminany izy ireo fa ny Macs dia hitondra ny takelaka amin'ny iPhone X amin'ny famoahana amin'ny ho avy
Mandroso amin'ny haingam-pandeha lehibe ny teknolojia ary miaraka aminy, manatsara ny fitaovany i Apple mba hahatonga azy ireo ho kanto sy hahazo aina kokoa ary hahery vaika. Ny tatitra vaovao dia milaza fa ny orinasan-tserasera Cupertino, dia hiditra ao anatin'ny teknolojia tsy ho ela izay ampiasaina ao amin'ny motherboard amin'ny iPhone X amin'ity taona ity.
Io no fanazavany Ming-Chi Kuo, Mpandalina manam-pahaizana momba ny haitao Apple, izay nanolotra tatitra misy antsipiriany mahaliana momba an'io hevitra io. Kuo miantoka fa ny orinasa amerikana avaratra dia miasa amin'ny fampandrosoana ny motherboard sy ny hafainganam-pandeha kokoa, ampiharina amin'ity taona 2017 ity, ao amin'ireo vokatra vaovao an'ny orinasa, ao anatin'izany ny Macs ho avy sy ny Apple Watch vaovao natolotra.
Raha ny fantatra dia nanao fifanarahana fiaraha-miasa i Apple Career amin'ny fikasana ny ampiharo ny fandrosoana natao ho an'ny iPhone X amin'ny taranaka manaraka MacBook, mampihena ny habaka takiana amin'ny motherboard motherboard ary manatsara ny fandefasana data toy ny fampiasana USB 3.2.
Amin'izao fotoana izao, ny motherboard motherboard an'ny iPhone vaovao takelaka miovaova vita amin'ny polymera fitaratra, ary ny hevitra farany dia ny fiparitahan'izy ireo amin'ny vokatra rehetra saika an'ny orinasa.
LCP FPCB, Nomena an'ity chip vaovao Apple patentable ity izay manolotra, manolotra fandefasana data an'ny fitoniana lehibe kokoa, ary fanoherana bebe kokoa ny hafanana sy ny hamandoana.
Ilay mpandalina dia manasongadina ihany koa ny tanjon'ny Apple Ny fampidirana an'ity vahaolana vaovao ity amin'ny fitaovana Apple rehetra ao anatin'ny fotoana fohy dia fanamby goavana, raha jerena ny fahasarotany, fa raha azo ampiharina tsara dia hanome tombony mihoatra ny herintaona noho ny mpifaninana lehibe aminy.
Araka ny fantatsika, Apple dia mitady hatrany ny ho lohalaharana amin'ny tsena, ary miaraka amin'ity fampifanarahana vaovao amin'ny vokatra 2018 anao ity dia afaka milamina indray ianao amin'ny toerana izay tianao foana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Maminany izy ireo fa ny Macs dia hitondra ny takelaka amin'ny iPhone X amin'ny famoahana amin'ny ho avy
Android Wear, midina ary tsy misy frein
Ny fampiharana macOS rehetra dia ho 64-bit manomboka amin'ny taona 2018